YMA News – Just another WordPress site
မိခငျဖွဈသူအပွငျက ပွနျလာစဉျ မီးဖိုခနျးအတှငျးသမီးငယျမှ “ အမေ သမီး နာတယျ နာတယျ ” လို့ ငိုနသေဖွငျ့ မေးမွနျးရာမှ… See more
Zawgyi မိခင်ဖြစ်သူအပြင်က ပြန်လာစဉ် မီးဖိုခန်းအတွင်းသမီးငယ်မှ “ အမေ သမီး နာတယ် နာတယ် ” လို့ ငိုနေသဖြင့် မေးမြန်းရာမှ… See more ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိပ်မူကျေးရွာအုပ်စု ဘွမ်ရာကုန်း ကွက်သစ် ရပ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဒေါ်ခင်မြဝင်းရဲ့ သမီးဖြစ်သူ သုံးနှစ် သုံးလ အရွယ် မ ….ကို တအိမ်ထဲနေတဲ့ ရေမဆေးကျောက် …
သတို့သမီးဖွဈသူကသာ ပွုံးပြျောရှငျစှာနဲ့ မင်ျဂလာပှဲကို ကငျြးပနပေမေယျ့ သတို့သားကတော့ တဈခြိနျလုံးခေါငျးကိုငုံ့ထားသောကွောငျ့..See more. ..
မင်္ဂလာပွဲနေ့လေးသည် ချစ်တဲ့သူတိုင်းအတွက် အပျော်ရွှင်ရဆုံးနဲ့ တက်ကြွနေရမည့်အချိန်လေးဆိုပေမယ့်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်မချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ရသည့်အခါ မျက်နှာပေါ်က အပြုံးလေးတွေဟာ ကင်းမဲ့နေတတ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ တရုတ်နိုင်ငံ Anhuiပြည်နယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော မင်္ဂလာပွဲလေးသည် သတို့သားဖြစ်သူမှ တစ်ချိန်လုံး ခေါင်းကိုငုံ့ထားပြီး ဘယ်သူ့မျက်နှာမှမကြည့်ပဲ ဧည့်သည်များကိုပင် ဂရုမစိုက်သည့်အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့် လူအများရဲ့ ပြောစရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ သတို့သားရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် အများက လူကြီးမိဘတွေအတင်းပေးစားလို့ မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ရခြင်းကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်နေသည်ဟု ထင်ထားကြသော်လည်း သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည် …
သားဖွဈသူမှ အိမျသာကငျြးပျေါတတျပွီး ဖုနျးပွောရာ ကငျြးထဲပွုတျကြ၍ မိခငျမှဆငျးကယျရာ သားအမိနှဈဦးစလုံး… See more
Zawgyi သားဖြစ်သူမှ အိမ်သာကျင်းပေါ်တတ်ပြီး ဖုန်းပြောရာ ကျင်းထဲပြုတ်ကျ၍ မိခင်မှဆင်းကယ်ရာ သားအမိနှစ်ဦးစလုံး… See more မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မလှိုင်မြို့နယ်တွင်အိမ်သာကျင်းအဖုံးပေါ်ဖုန်းပြောနေသည့်သားဖြစ်သူအိမ်သာကျင်းအတွင်းပြုတ်ကျသံကြား၍သွားရောက်ကယ်ဆယ်သည့်မိခင်ဖြစ်သူပါထပ်မံပြုတ်ကျပြီးသားအမိနှစ်ယောက်လုံးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရသည်။ ညနေ(၄:၃၅)အချိန်ခန့်မလှိုင်မြို့အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်မြို့ဦးကွက်သစ်တွင်သားအမိနှစ်ဦးအိမ်သာကျင်းအတွင်းပြုတ်ကျသေဆုံးနေကြောင်းသတင်းအရမလှိုင်မြို့မရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူများမှသက်သေများနှင့်အတူသွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ရာသေဆုံးသူနှစ်ဦးမှာ ဒေါဖြူခိုင်(၄၈)နှစ်နှင့်သားဖြစ်သူရိန်စိုး(၁၈)နှစ်တို့ဖြစ်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းချက်အရမောင်သူရိန်စိုးမှအနက်(၉)ပေ ကျင်းဝအကျယ်(၃)ပေ(၁၀)လက်မခန့်မိလ္လာရေအနက်(၃)ပေကျော်ခန့်ရှိအိမ်သာကျင်းအဖုံးအုပ်ထားသည့်နေရာမှရပ်လျက်ဖုန်းပြောနေစဉ်ဖုံးအုပ်ထားသည့် သစ်သားတန်းများကျိုးကျပြုတ်ထွက်သံမျာကြား၍မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဖြူခိုင်မှ၎င်းနေရာသို့ရောက်ရှိလာပြီးသစ်သားတန်းကျိုးပဲ့များဖယ်ရှား၍လှေကားချကာကျင်းအတွင်းကျနေသည့်သားဖြစ်သူမောင်သူရိန်စိုးအားလှေကားပေါ်မှအောက်ဘက်သို့ဇောက်ထိုးအနေအထားဖြင့်ဂျိုင်းမှမ၍ဆယ်ယူစဉ် အင်အားမမျှပဲမိခင်ဖြစ်သူပါအိမ်သာကျင်းထဲထပ်မံပြုတ်ကျခဲ့ရာမောင်သူရိန်စိုးမှာနှာခေါင်းမြုတ်နေသည့်အနေအထားဖြင့်လည်းကောင်းမိခင်ဒေါ်ဖြူခိုင်မှာဇောက်ထိုးကျလျက်သားဖြစ်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်အားဖိလျက်မိလ္လာရေအတွင်းမျက်နှာနစ်နေသည့်အနေအထားဖြင့်သေဆုံးလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်ပွားစဉ်မိသားစုဝင်များ၏အော်ဟစ်အကူညီတောင်းမှုကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှလူအများရောက်ရှိဆယ်ယူခဲ့ကြပြီးသေဆုံးသူနှစ်ဦးတွင်ပြင်ပဒဏ်ရာမရှိပါးစပ်အတွင်းမှမိလ္လာရေများထွက်နေပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသဖြင့်အလောင်းများအားရဲဆေးစာဖြင့်ပြည်သူဆေးရုံသို့ပို့အပ်ကာဓမ္မတာအတိုင်းသေဆုံးခြင်းဟုတ်မဟုတ်သိရှိနိုင်ရေးအတွက်မလှိုင်မြို့မရဲစခန်းမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ Unicode သားဖွဈသူမှ အိမျသာကငျြးပျေါတတျပွီး ဖုနျးပွောရာ ကငျြးထဲပွုတျကြ၍ မိခငျမှဆငျးကယျရာ သားအမိနှဈဦးစလုံး… See more မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး မလှိုငျမွို့နယျတှငျအိမျသာကငျြးအဖုံးပျေါဖုနျးပွောနသေညျ့သားဖွဈသူအိမျသာကငျြးအတှငျးပွုတျကသြံကွား၍သှားရောကျကယျဆယျသညျ့မိခငျဖွဈသူပါထပျမံပွုတျကပြွီးသားအမိနှဈယောကျလုံးသဆေုံးမှုဖွဈပှားခဲ့ကွောငျးစုံစမျးသိရသညျ။ ညနေ(၄:၃၅)အခြိနျခနျ့မလှိုငျမွို့အမှတျ(၂)ရပျကှကျမွို့ဦးကှကျသဈတှငျသားအမိနှဈဦးအိမျသာကငျြးအတှငျးပွုတျကသြဆေုံးနကွေောငျးသတငျးအရမလှိုငျမွို့မရဲစခနျးတာဝနျရှိသူမြားမှသကျသမြေားနှငျ့အတူသှားရောကျကွညျ့ရှုစဈဆေးခဲ့ရာသဆေုံးသူနှဈဦးမှာ …
ကလေးလိုစိတျဖောကျပွနျသှားသော ဇနီးဖွဈသူကို စိတျမကုနျပဲ ပှခြေီ့ကာ နို့ဘူးလေးတိုကျရငျး ထမငျးပါစိတျရှညျရှညျနဲ့ ခှံ့ကြှေးနသေော အမြိုးသား..See more. ..
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် အချို့သောသူများအတွက် လွယ်ကူပြီး တကယ်တမ်းလက်တွေ့ဘဝကတော့ အဆင်မပြေ အခက်အခဲလေးတွေရှိကာ သားသမီးတွေရှိလာပါက ဇနီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အိမ်မှုကိစ္စတွေ ပိုများပြီး ခင်ပွန်းသည်ကအလိုက်သိစွာ လုပ်ကိုင်ပါက အိမ်ထောင်ကျကံကောင်းသည်ဟု ဆိုရမည်။ ယခုတွင်လည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ အသက်၅၀ကျော်အရွယ် ဇနီးသည်တစ်ဦးသည် ဖျားနာပြီးနောက် သူမရဲ့အကျင့်စရိုက်ဗီဇအားလုံးက ပုံမှန်မဟုတ်တော့ပဲ ကလေးလေးတစ်ယောက်လိုဖြစ်သွားကာ အခြားသူတစ်ဦးလို လုံးဝကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ဇနီးသည်မှာ ထိုသို့ဖြစ်သွားသော်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည် စိတ်မပျက်ပဲ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာ အမြဲပွေ့ချီထားကာ …
မိခငျဖွဈသူမှ ဆေးသောကျပွီး ကွမျးပွငျပျေါလှဲကနြတောကို သမီးမှတှေ့၍ ပတျဝနျးကငျြကို အျောငိုပွီး အကူညီတောငျးရာမှ… See more
မိခငျဖွဈသူမှ ဆေးသောကျပွီး ကွမျးပွငျပျေါလှဲကနြတောကို သမီးမှတှေ့၍ ပတျဝနျးကငျြကို အျောငိုပွီး အကူညီတောငျးရာမှ… See more တောငျပိုငျးခရိုငျ ကြောကျတနျးမွို့နယျ ကမာကလုပျနယျမွရေဲစခနျးအပိုငျကုလားတနျးကြေးရှာအုပျစု ရှပွေညျသဈကြေးရှာတှငျအမြိုးသမီးတဈယောကျအဆိပျသောကျသဆေုံးမှုဖွဈပှားခဲ့သညျ၊ဖွဈစဉျမှာယမနျနညေ့နေ(၄)နာရီခှဲအခြိနျခနျ့ကကုလားတနျးကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးသူရဟနျမှ ကမာကလုပျနယျမွရေဲစခနျးသို့ဖုနျးဆကျအကွောငျးကွားမှုကွောငျ့ကမာကလုပျနယျမွရေဲစခနျးမှစခနျးမှူးရဲအုပျမြိုးကိုကိုနယျထိနျးရဲတပျသား စိုးထကျအောငျတို့မှကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးရာအိမျမှူးမြားနှငျ့အတူသှားရောကျစဈဆေးခဲ့ကွသညျ၊ ထိုသို့သှားရောကျစဈဆေးရာ သဆေုံးသူမှာ မဝဝေနေိုငျ(၂၃)နှဈ(ဘ)ဦးသကျနိုငျရှပွေညျသဈကြေးရှာနထေိုငျသူဖွဈပွီး ညနေ(၄)နာရီခှဲအခြိနျခနျ့က ၎င်းငျး၏နအေိမျအတှငျး အဆိပျသောကျ၍ သတိလဈမမြေ့ောနသေညျကို သမီးဖွဈသူ မခမျြးမွသေ့ဇငျ(၆)နှဈမှမွငျတှခေဲ့ပွီးအမဘောဖွဈတာလဲမသိဘူးဟုပွောကာအျောဟဈငိုနခေဲ့သဖွငျ့ နအေိမျအနီးနထေိုငျသူယော …
အသကျ ၇၀ နဲ့ ၂၇ နှဈအရှယျ မောငျနှံ နှဈယောကျရဲ့ ထူးခွားတဲ့ ဖူးစာ ဇာတျလမျ
ယနလေို့ငျးပျေါမှာ ပြံ့နှံ့နတေဲ့ အကွောငျးအရာကတော့ ဇလှနျမွို့က အသကျ ၇၀ နဲ့ ၂၇ နှဈအရှယျ ဇနီးမောငျနှံ နှဈယောကျရဲ့ အကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဇှနျလ ၁၂ ရကျနမှေ့ာတော့ သူတို့ နှဈယောကျရဲ့ မင်ျဂလာလကျမှတျရေးထိုးတဲ့ အခမျးအနားကို ပွုလုပျခဲ့ပွီး ပြျောရှငျစှာ လကျထပျခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ အသကျ ၇၀ အရှယျ သတို့သမီး အနျတီဖူးကတော့ ဇလှနျမွို့မှာ …
ဖခငျဖွဈသူက (၁၃) နှဈအရှယျသမီးကို ခွုံပုတျထဲ ချေါဝငျသှားတာကို အမဖွေဈသူမှ မွငျတှေ့၍ ဘာလုပျနတောလဲ ဟု သမီးကိုမေးမွနျးရာ
Zawgyi ဖခင်ဖြစ်သူက (၁၃) နှစ်အရွယ်သမီးကို ခြုံပုတ်ထဲ ခေါ်ဝင်သွားတာကို အမေဖြစ်သူမှ မြင်တွေ့၍ ဘာလုပ်နေတာလဲ ဟု သမီးကိုမေးမြန်းရာ မန္တလေးမြို့ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် စက်မူမြို့သစ်အတွင်း အေးမေတ္တာလမ်းကြား ၅၆×၅၇ ကြား ဒူးကြားလမ်းပေါ် ကျူးမြေကွက် (ဆ) ရပ်ကွက်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူမှ ၁၃ နှစ်အရွယ် သမီးအရင်းအား သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်မှု ယမန်ညနေပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။အမှုဖြစ်စဉ်မှာ တရားလိုနှင့် မိခင်ဖြစ်သူ …
တူဖွဈသူ(၁၀)တနျးအောငျလို့ ဂုဏျယူနတေဲ့ခငျပှနျးကို ဇနီးဖွဈသူက မကနြေပျသဖွငျ့ အိပျပြျောနစေဉျတှငျ… See more
တူဖြစ်သူ(၁၀)တန်းအောင်လို့ ဂုဏ်ယူနေတဲ့ခင်ပွန်းကို ဇနီးဖြစ်သူက မကျေနပ်သဖြင့် အိပ်ပျော်နေစဉ်တွင်… See more အမှုဖြစ်စဉ်မှာ ယမန်ညနေ၄နာရီ၂၀မိနစ်အချိန်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဟင်္သာတခရိုင် ၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ် ၊ သဲနုကုန်းနယ်မြေရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးရဲအုပ်…..သည် စခန်းမှူးတာဝန်ထမ်း​ဆောင် နေစဉ် ချင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦး….မှ ရှမ်းကွင်းကျေးရွာတွင်လင်းမယားချင်း ဓားခုတ်မှုဖြစ်ပြီးခင်ပွန်းဖြစ်သူ သေဆုံးသွားကြောင်းအကြောင်းကြားလာသဖြင့် စခန်းမှူး နှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်သက်သေများနှင့်အတူ အခင်းဖြစ်နေရာသို့ သွားရောက် စစ်ဆေးရာ နံနက်၉နာရီအချိန်ခန့်တွင်သေဆုံးသူကိုသိန်းဇော်သည် …
ယောက်ခမဖွဈသူအား လငျမယားခဈြခွငျးကို ခှဲရမလားဆိုကာ မိနျးမကို ”နငျအိမျပွနျလာခဲ့၊ နငျဘယျလို ဟာလဲ”ဟုပွောဆိုပွီး အိမျသို့ပွနျချေါစဉျ စကားမြားကွရာမှ… See more
Zawgyi ယောက္ခမဖြစ်သူအား လင်မယားချစ်ခြင်းကို ခွဲရမလားဆိုကာ မိန်းမကို ”နင်အိမ်ပြန်လာခဲ့၊ နင်ဘယ်လို ဟာလဲ”ဟုပြောဆိုပြီး အိမ်သို့ပြန်ခေါ်စဉ် စကားများကြရာမှ… See more ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြန် အောင်မြို့နယ် အင်ပင်ရဲစခန်းပိုင် နယ်မြေအတွင်း ကညင်ငူကျေးရွာ အုပ်စု ဘွက်အင်းကုန်းရွာတွင် ယမန်နေ့ညနေပိုင်းက ခင်ပွန်းဖြစ် သူကဇနီးဖြစ်သူအား ဓားဖြင့်ထိုး သတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဖြစ်စဉ်မှာရွှေဘ(၂၆နှစ်)ကညင် ငူရွာသစ်ရွာနေသူသည် အင်္ဂပူမြို့ နယ် သံပရာကွင်းကျေးရွာသို့ဘော …
မိခငျဖွဈသူမှ (၁၁)နှဈအရှယျသမီးကို အဖှားအိမျသို့ ဟငျးသှားပို့ခိုငျးရာ (၆၃)နှဈအရှယျ အမြိုးသားမှ မုနျ့ဖိုး(၅၀၀)ပေးကာ နအေိမျသို့ချေါပွီး… See more
Zawgyi မိခင်ဖြစ်သူမှ (၁၁)နှစ်အရွယ်သမီးကို အဖွားအိမ်သို့ ဟင်းသွားပို့ခိုင်းရာ (၆၃)နှစ်အရွယ် အမျိုးသားမှ မုန့်ဖိုး(၅၀၀)ပေးကာ နေအိမ်သို့ခေါ်ပြီး… See more ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြောင်းမြမြို့၊ မြရတနာရပ်ကွက်မှာ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကို အသက် ၆၃ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားက သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မြောင်းမြမြို့၊ မြရတနာရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့သမီးဖြစ်သူမ….ကို မိခင်ဖြစ်သူက မနက်က နေအိမ်ကနေ အိမ် ၅ လုံးကျော်မှာရှိတဲ့ …
Copyright © 2022 YMA News.